Qaybtii Saddaxaad:- Saaxiibtinimadii Shalay Halkay Maraysaa Saakay, (Sheeko Taxane Ah).. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: May 30, 2017, 9:24 pm
Billowga Qeybta Saddaxaad
Sheekadii waxay inoo maraysay oday maxamuud oo ninkii libaaxa laga riday ahaa iyo cabdulaahi oo reerkii odayga jooga iyo maxamad oo saaxiibkii waa yay magaaladiina cidla kunoqotay ileen saaxiibkiibuu waa yaye. Hadaba cabdulaahi oo geed reerka korkiisa ah fadhiya halkaana gogishu utaalo ileen waa ninreerka marti u ahe
waxaa uu arkay goor casara gabadh aad uquruxbadan oo adhi wada oo odaygu dhalay intakacay buu utagay ayuuba sheeka ubilaabay. Waala usbartay haasaawa mecaan oo midba midka kale ubogay baa la gushee kaystay intii la isku jeeday waxaaba lumay arigii gaba dhii inta meela ha wax ka yar fir fiirisay oo waxba waydaybay uqaylisay reerkii isna inta yaabay ayuu xagii geela shii oo sooxaroonaya aadaybuu lasoo dheel may wii lashii geelii. Waxaa loo sheegay in ari reerka kalumay isagiyo dhawr qof oo geela wax ka waday baa birmad kii kadaba tagay wayxayna gaadheen dadkii baadi doonka ahaa hadaba. Waxoogaa markii lawar wareegay.
waxay na noqo tay xili danbe oo dadkii wuxuu go aan saday in hada la iska laabto oo rerkii dibloogu noqdo barina labaadi doono waala jeed saday hasa yeeshee c/lhi isagu waanin nasiib badan ma uusan laaban dadkii oodhan iyo gabadhiina way wada laabteen lkn isagu shanqadh dhagaysi iyo baadi goob ayuu kulaabtay.
Wuxuu war wareegaba xili danbe oo hiraab ah ayuu arkay adhigii inta weer dhexgalay guuxa iyo daryaanka dad hurda mooyee qof kastoo soo jeedaa dareemi karo inta budh kiisii midi gays tay buu dhinicii u arday oo uu arigii ka gaadhay weerkii waa dhur waagii yaraaye.
Waagu markuu bar yay ee la toos toosay buu arigii oo nabad qaba keenay reerkii odaygiibaa maqlay qaabkuu c/lhi ariga weerka uga bad baad shay weerkuna haduu ari arko ilaa uu ka u’dan beeya dilo madaayo.
Oday Maxamuud farxad gabadhii ayuu siin iyo meher isugu daray wiil kii c/lhi ahaa. Guribaana loodhisay reerkoodiina warkiisii waa helay waana laysa soo ag dagay. Wuxuuna noqday c/lhi nin labada reerba udhexeeya oo aad loo jecel yahay noloshaa markuu mudo kunoolaa ayaa war looga keenay sxbkii maxamad oo layiri sxbkaa ciidan baa laga dhigay oo magaaladiibuu rafaad nafta ukeenay reer miyigana waaba uudhibaa oo dadka aad buu u xidh xidhaa c/lhi inta hoosta ka qoslay buu yiri suurow daranaa maxamad dadkuu xabsiga geeyaa oo waaba ciidan.